सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘ऐतिहासिक’ गल्ती
२७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार एउटा गलत र हास्यास्पद आदेश सुनायो । दुईजना न्यायधीशको हस्ताक्षर रहेको आदेश 'नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७' अनुसार सुनाइएको थियो । मधेस आयोग गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फागुन २५ गते सुनाएको परमादेशमा 'नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७' उल्लेख थियो । भोलिपल्ट टाइपिङमा मिस्टेक भएको भन्दै सच्याएर 'नेपालको अन्तरिम संविधान...
कर्मचारीको सपथमा गोप्य शब्द हटाऔं
स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कहरु 'डिजिटल' पद्दतिमा राख्नुपर्छ । सूचना मैत्री प्रशासकलाई तक्मा दिने, निजामती पुरस्कार दिने, पदोन्नति दिने, विदेश भ्रमणमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । जनताको सूचनाको हकलाई वेवास्ता गर्नेलाई माथिका कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्छ । कर्मचारीको शपथग्रहणमा रहेको 'गोप्य' शब्द हटाउनुपर्छ । ...
दलाई लामा र तिब्बत आन्दोलनलाई कसरी हेर्ने ?
वुद्ध धर्मका धर्मगुरु दलाइ लामालाई अमेरिकी एवं पश्चिमेली साम्राज्यवादी शक्तिहरुले तिब्बतको सीमित घेराभित्रको चीन विरोधी राजनीतिमा सक्रिय गराउँदै आए । दलाई लामालाई मात्र तिब्वतको नेता बनाई चीन विरोधी राजनीतिमा सक्रिय गराउनु उनको अपमान थियो ।...
बालिका बलात्कार : संवेदनहीनताको पराकाष्टा
छ वर्षीया बालिका बलात्कृत हुन्छिन् त्यो पनि २८ वर्षे युवकबाट । बलात्कारपछि लठ्ठी घुसाइन्छ । मानवताका सबै अंश बिर्सेर गरिएको कुकृत्यले मृत्युको मुखमा पुग्छे । बारा सदरमुकाम कलैयामा पछिल्लो समयमा भएको घटना आङ सिरिङ्ग पार्नेखालको छ । ...
केही भूलचुक त भयो डाक्टर सा’ब !
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, चाहे ती कांग्रेस हुन् वा कम्युनिष्ट, चाहे ती राजावादी हुन् वा मधेसवादी, राष्ट्रियता र भारतको विरोध वा समर्थनलाई नागरिकसँग गरिने 'इमोसनल ब्लाकमेलिङ्ग' को विषय बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो सर्दो पर्दा भारतलाई विधाता ठानिरहेका हुन्छन् । आफ्नो सर्दो नपर्दा विरोध गरी टोपल्छन् । थोरै साह्रो गाह्रो पर्नेवित्तिकै आफै गुहार्न जान्छन यिनीहरु...
एकीकृत जनक्रान्तिले ‘ब्यालेट र बुलेट’ दुवै स्वीकारेको छ
नेकपा माओवादी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले परिकल्पना गरेको एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त एक प्रस्तावित दस्तावेज हो । यो प्रस्तावित दस्तावेज प्रस्तावित मान्यता वा सिद्धान्त हो । ...
बल्ढ्याङ्ग्रो जस्तो दुई तिहाइ
कसरी माघ ५ को स्थिति आयो भन्ने बारेमा पहिचानविरोधी शक्तिहरुले जसरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजे पनि इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा किन नहोस्, सत्यतथ्यमा आधारित उपयुक्त र चितबुझ्दो जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । वास्तवमा संविधानसभाभित्र संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र शासकीय स्वरुपमै सहमति हुन नसकेको हो । ...
पैसा तिरेर ग्यास किन्छु भन्दा मानिसले किन्न पाइरहेका छैनन् । कति ग्यास आयात हुन्छ, कसले कति बेच्छ, कसले कति किन्छ, अहँ यो सबको हिसाबमा सरकार कहीँ देखिन्न । न अनुगमन, न नियमन न सहजीकरण कहीँ पनि सरकार देखिन्न । सरकार या त छैन, या त कतै हराएको छ । ...
बाबुरामको भारत भ्रमण : एक टिप्पणी
बाबुराम भट्टराईलाई भारत पुग्दा धेरै दिनपछि माइती फर्केकी चेलीलाई जस्तो अनुभूति हुने गर्दोरहेछ भन्ने उनको हाउभाउ र व्यवहारले देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा उनी स्वयम्ले सार्वजनिक गरेका तस्वीरहरुले उनी दिल्ली पुग्दा कति प्रफुल्लित हुँदारहेछन् भन्ने देखाएको छ ।...
स्वाइन फ्लुबाट मृत्युको सम्भावना कति हुन्छ ?
स्वाइनले फ्लु अहिले धेरै नै चर्चा पाएको छ । यसले जनमानसमा डर उत्पन्न गरेको छ। स्वाइन फ्लुका बारेमा मानिसहरुमा सही ज्ञान हुन जरुरी छ, सही शन्देश सबैमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तब्य हो । लक्षण देखा परेको व्यक्तिले उचित सल्लाह र समयमा नै उपचार पायो भने, यो रोग ले भयानक रुप भने लिन सक्दैन ।...
एमालेमा ‘झापाली’ को चिनारी र प्रभाव
नेकपा एमालेलाई अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरु 'झापाली' भन्न पछि पर्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले गर्ने यो सम्वोधनले एकैपटक धेरै अर्थ बोकेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पुरानो एवं क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि भएका केही केही साथीहरु आफ्नो राजनीतिको ऐतिहासिक निरन्तरता झल्काउन पनि 'झापाली' प्रशंग उठाउने गर्नुहुन्छ । कहीँ 'घृणा' वा 'विरोध' तथा कहीँ भने केही विरोधी मानसिकता...
सुदुरपश्चिमबाट लेखराज भट्टलाई पत्र
समय सँधै एकैनासको हुँदैन रहेछ। परिस्थितिको अनुकुलतालाई र प्रतिकुलतालाई ध्यानमा राखेर नै मान्छेले आफूलाई चलायमान बनाउँदोरहेछ। बढो अचम्भित हुँदै भावुक र दुखका साथ भन्नु पर्छ, किन किन आज तपाईलाई देखेर भित्र कतै अन्तरकुन्तरमा दया पलाएको छ।...
« अघिल्ला 1 … 128 129 130 131 132 … 155 पछिल्ला »